Sidee u dhacday Doorashadii Khaatuma ee lagu doortay Cali Khaliif | Sidee u dhacday Doorashadii Khaatuma ee lagu doortay Cali Khaliif – Latest News
« Golaha Wasiirada Puntland oo ansixiyey in Magaalada Saaxo ay noqoto Degmo rasmi…
ICRC: Still Time to Avert Somalia Famine »
Sidee u dhacday Doorashadii Khaatuma ee lagu doortay Cali Khaliif
Doorasho maanta lagu qabtay Degaanka Saaxdheer oo ka tirsan Gobolka Sool ayaa Cali Khaliif galeydh uu ku guuleystay inuu noqdo hogaamiyaha Maamulka Khaatimo isagoo ka guuleystay Maxamed Yuusuf Indhosheel.
sidoo kale Hogaamiye ku xigeenka Khaatumo ayaa waxaa loo doortay Cabdul Cagalule oo ka guuleystay Mukhtaar Ibraahim Xabashi.
markii ay soo ifbaxday inuu Cali Kahliif guuleystay ayaa waxaa Magaalada laascaanood waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayay inkastoo Ciidamada Somaaliland ay kala ceeyriyeen dadkaasi.
Siyaasiga Cali Khaliif Galeydh oo ah nin Somaaliya laga dhax yaqaano ayaa xilal kala duwan kaso qabtay dowladihii dalka soo maray.
Cali Khaliif waxa uu ku dhashay Magaalada Laascaanood 1941-kii isagoo waxbarashada hoose ,dhexe iyo sare ku qaatay Dugsiga Magaalada Sheikh ,waxaana intii u dhexeysay sanadihii 1963-kii-1965-kii uu minxa waxbarasho ka helay Jaamacada Boston ,halkaasi Jaamacad kaga baxay isagoo bartay Kuliyada Cilmiga siyaasdaa iyo dhaqaalaha.
sidoo kale intii u dhexeysay `1967-kii-1969-kii wuxuu darajada waxbarasho ee Masterka ka qaatay Jaamacada Syracuse ee Magaalada Newyork wuxuuna ka heystaa kuliyada Maamulka guud iyo Hey’daha Dowladda.
xilgaasi kadib mudo afar sano ah Jaamacadii uu ka baxay ayuu la shaqeynayay ,iyadoo 1974-tii uu madax ka noqday Warshadii Sokorta ee Jowhar.
xilgaasi kadib waxaa ku soo xigtay in sanadkii 2001-kii uu R.wasaare ka noqday Dowladii C/Qaasim salaad Xasan.
ka dibna waxa uu ahaa Xildhibaan katirsan Baaralamanka Somaaliya oo ilaa hada uu xubin ka yahay.
waxaa la aaminsan yahay in Mr Galeydh uu yahay siyaasi rugcadaa ah balse aan nasiib u helin inuu masuul sare ka noqdo Maamul iyo Dowlad awood badan.
Cali Kahliif Galeydh ayaa hada hogaamin doona Maamul aan la aqoonsaneyn oo caqabado badan ay horyaalaan.